Kandidà Andriantsitohaina Naina: manana ny “veliranon’Iarivo” | NewsMada
Kandidà Andriantsitohaina Naina: manana ny “veliranon’Iarivo”
“Ireto àry ny velirano hataoko aminareo, ry Antananarivo. Izay no ataontsika hoe veliranon’Iarivo”, hoy ny kandidà Andriantsitohaina Naina, nanolotra ny fandaharanasany. Voalohany, ny ady amin’ny kolikoly: “Aoka izay”. Aoka izay ny fanararaotam-pahefàna, ny hetra tsy ara-drariny, ny tsindrihazolena amin’ireo mpivarotra sy vahoaka madinika. Aoka izay ny fivarotana ny tanin’ny kaominina.
Laharam-pahamehana ny fandriampahalemana hiainan’ny tsirairay milamina. Taona maro izao no niainana tao anatin’ny tebiteby sy ny tahotra: mpangarom-paosy, mpanendaka, mpangalatra, mpamono olona… “Fantatro loatra ary tsapako ny tebiteby sy ny tahotra iainanareo isan’andro. Izaho sy ny ankohonako dia niaina izany. Tsy tiako hiaina izany intsony ny vahoaka”, hoy izy.
Ny amin’ny mpivarotra sy fanadiovana…
Tokony ho afa-miasa malalaka ho fampiroboroboana ny toekaren’Antananarivo ny mpivarotra amin’ny toerana voatokana sy manaraka fepetra. Adidin’ny kaominina ny manomana kioska hitobian’ny fivarotana, ny manabe sy manampy azy ireo hanaraka ny fenitra sy torolalana. Tsy afa-misaraka amin’ny fampiroboroboana ny fandraharahana ny fampandrosoana an’Antananarivo.
“Rariny ve hoe ny renivohitr’i Madagasikara miaina ao anatin’ny loto?”, hoy izy. Mila lamin’asa ny fitantanana ny fanadiovana ny tanàna. Tsy mendrika haloto intsony Antananarivo ary tokony ho modely ho an’ny tanàna eto Madagasikara. Mila mandray andraikitra ny kaominina sy isika rehetra.
Mila fahazavana ny tanàn’Antananarivo hatrany amin’ireo lalankely. Ilain’ny vahoaka koa ny rano madio, hatao manakaiky ny isan-tokantrano. Tsy rariny ny andoavam-bola idirana amin’ireo toeram-pivoahana natao ho an’ny rehetra.
Aoka izay ny fotoana very lany ao anatin’ny “embouteillage””, hoy izy. Mila fandaminana ny fivezivezena sy ny fitaterana eto an-drenivohitra. Mila ben’ny tanàna ananan’ny mpamatsy vola fitokisana Antananarivo mba ahafahana manana fotodrafitrasa lehibe mendrika azy.
Hotsinjovina ny sahirana sy ny vehivavy
Mila tsijovina ary hanaovana fotodrafitrasa manokana ireo sahirana sy marefo. Ireo vehivavy sy ireo renim-pianakaviana mananontena, hasiana toeram-piofanana hahazoany mivelona sy mivelatra ao anatin’ny toekarena. Tsy ekena intsony ny fampiasana herisetra, ny fanararaotana ara-nofo na arakasa ny ankizy tsy ampy taona. Hojerena manokana ireo zokiolona mba hahazoana mitsinjo sy manome fanampiana azy ireo.
Mila fanamboarana ireo sekoly maro sy ireo trano fampianarana. Mila tohana ara-tsakafo ny ankizy, adidin’ny kaominina no mitsinjo azy. Eo koa ny fiahiana sy fiarovana ireo sahirana, indrindra ara-pahasalamana. Noho izany, ilaina ny fanamboarana ireo tobim-pahasalamana toy ny “Institut d’hygiène” sy “BMH” mba hahazoan’ny tsirairay mitsabo tena. Ary tokony hanakaiky ny vahoaka izay tena mila azy ny mpitsabo.
Mila tamberin’andraikitra ny fitantanana
Tonga ny fotoana hiasan’ny kaominina ho an’ny vahoakany. Ny mponin’Antananarivo dia tokony hitaky ny tamberin’andraikitra amin’ireo mpitantana ny mponina. Tokony hanaraka fenitra sy arifomba ary ao anatin’ny fotoana haingana ireo serivisy atolotron’ny kaominina: kopia, fahazoan-dalana manorin-trano…
Tanàna mitsinjo ny tontolo iainana ny Tanana mandroso, holovain’ireo dimby sy fara.
“Rariny ve raha avela mitsipozipozy ny “parc” Tsimbazaza?”, hoy izy. Noho izany, adidintsika ny miaro ireo harem-pirenena sy vakoka izay mampiavaka an’Antananarivo ary reharehan’ny Malagasy.
Tsy hadino ny tanora
Hadino ireo tanora marobe eto Antananarivo. Tsy ampy ny fialamboly. Tsy ampy ny toerana fanaovana fanatanjahantena. Manana anjara andraikitra ny kaominina amin’ny fikarakarana sy famolavolana azy ireny. Noho izany, mila ampitomboina ny toeram-pialamboly eto Antananarivo, ary efa manana fotodrafitrasa vonona isika.